China Electric engela steel tower ifektri abakhiqizi | Qiangli
Umbhoshongo wensimbi ye-engeli kagesi
I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi kagesi wuhlobo lwesakhiwo sensimbi olungagcina ibanga elithile liphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa. Eminyakeni yamuva nje, ngokukhula okusheshayo komnotho wezwe, imboni yamandla ithuthuke ngokushesha, okukhuthaze ukuthuthukiswa okusheshayo komkhakha wombhoshongo wokudlulisa. Ngokwezibalo, imali engenayo yokuthengisa yomkhakha wokudlulisa umugqa wombhoshongo eChina inyuke isuka ku-5 bil ...
Umbhoshongo wensimbi ye-engeli kagesi uhlobo lwesakhiwo sensimbi esingagcina ibanga elithile eliphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa.
Eminyakeni yamuva nje, ngokukhula okusheshayo komnotho wezwe, imboni yamandla ithuthuke ngokushesha, okukhuthaze ukuthuthukiswa okusheshayo komkhakha wombhoshongo wokudlulisa. Ngokwezibalo, imali etholwayo yokuthengisa embonini yombhoshongo wokudlulisa eChina inyuke isuka ezigidini ezi-5 zama-yuan ngo-2003 yaya kuma-42.6 billion yuan ngo-2010, nge-CAGR engama-36.68%, kanti imboni leyo isenkathini yentuthuko esheshayo. Ngo-2010, umkhakha wokudlulisa umugqa wombhoshongo waseChina unomkhuba omuhle wokuthuthuka, futhi amabhizinisi asembonini anokulawula okuphezulu namandla okulawula izindleko nezindleko, futhi anenzuzo eqinile.
Ekupheleni konyaka we-2010, ama-Enterprise amabhizinisi we-iron tower we-252 ngaphezulu kwesilinganiso e-China afinyelele kuma-yuan angama-32.250 billion, ukwanda kwe-25.55% ngonyaka ngonyaka. Ngo-2010, inani eliphelele lokukhishwa kwezimboni embonini yensimbi yensimbi yaseChina lalingama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-43.310, ukwanda okungama-25.36% unyaka nonyaka; imali yokuthengisa ibiyi-yuan engama-42.291 billion, ukwanda okungama-29.06% unyaka nonyaka; inzuzo ephelele ifinyelele kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.045, ukwanda ngama-43.09% unyaka nonyaka.
Ngesikhathi sePulani seminyaka eyisi-12, iChina izokwenyusa utshalomali kugridi yamandla kagesi, ngokutshalwa kwemali cishe kwama-2.55 trillion yuan, okubalwa ngama-48% okutshalwa kwemali okuphelele emandleni, okucishe kube ngu-3.0% ngaphezulu kunalokho onyakeni wesihlanu we-11 Hlela isikhathi. Ngokutshalwa kwemali okwandayo kugridi yamandla, isidingo sombhoshongo wolayini wokudlulisa nawo uzokhuphuka njalo, futhi nethemba lokuthuthukiswa komkhakha wombhoshongo wokudlulisa ubanzi. Izinga lokukhula eliyinhlanganisela laminyaka yonke lemali engenayo yokuthengisa embonini yombhoshongo wolayini waseChina ingama-28% kusuka kowezi-2011 kuya kowezi-2012, kanti kulindeleke ukuthi imali engenayo yokuthengiswa komkhakha wombhoshongo womugqa waseChina izofinyelela ku-RMB 70.3 billion.
Langaphambilini Umbhoshongo wensimbi ye-engeli kagesi
Olandelayo: Umbhoshongo wensimbi ye-engeli kagesi
I-Angle Steel Power Transmission Tower
I-Electric Angle Steel Towers
I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi ye-engela yikholamu lepuleti elinokwehla. Indawo yokubhoboza yakhiwa yensimbi engela ngokufana komunye nomunye, futhi ukuqondiswa kokuhlelwa kwensimbi ye-engeli kufana nokuqondiswa kokugeleza koketshezi. Unqenqema olubukhali lwensimbi ye-engeli lusengxenyeni engezansi, kanti isigaba esiphambanweni sime ngo "V". Kukhona igebe elithile legridi phakathi kwama-steels amabili aseduze. Owehlayo uyafana nethileyi elijwayelekile. Uketshezi i ...
Umbhoshongo wensimbi ye-engeli kagesi Ngokwakhiwa kwezikhathi, imibhoshongo yamandla ingahlukaniswa ngokwezinto zokwakha, izinhlobo zesakhiwo nemisebenzi yokusetshenziswa. Ngokuya ngemikhiqizo ehlukile, ukusetshenziswa kwabo nakho kwehlukile. Ake sichaze kafushane ukuhlukaniswa kwabo kanye nokusetshenziswa okuyinhloko: 1. Ngokuya ngezinto zokwakha, ingahlukaniswa ngohlaka lwokhuni, isakhiwo sensimbi, isakhiwo se-aluminium alloy kanye nesakhiwo sokhonkolo esiqinisiwe. Ngenxa yayo ...
I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi kagesi wuhlobo lwesakhiwo sensimbi olungagcina ibanga elithile liphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa. Ngawo-1980, amazwe amaningi emhlabeni aqala ukusebenzisa amaphrofayli wensimbi ensimbi esakhiweni sombhoshongo lapho kwenziwa imigqa yokudlulisela ye-UHV. Imibhoshongo yensimbi yensimbi enamapayipi wensimbi njengoba impahla eyinhloko ivele. EJapane, imibhoshongo yensimbi yensimbi icishe isetshenziswe ku-1000kV U ...
I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi kagesi wuhlobo lwesakhiwo sensimbi olungagcina ibanga elithile liphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa. Ngokukhula okuqhubekayo kwesidingo samandla eChina, ngasikhathi sinye, ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza zomhlaba kanye nokwenza ngcono izidingo zokuvikelwa kwemvelo, izinkinga zokukhethwa kwemizila nokudilizwa kwezakhiwo ezisemgqeni ziya ngokuya ...
I-Angle Steel Power Transmission Tower, Isakhiwo se-Tube Steel, I-Electric Angle Steel Towers, Electric Angle Steel Tower, Prefab Steel Izakhiwo, UMasipala Wezokuxhumana,